Sicir-dhimis Koogeek Alaabooyinka GurigaKay Iswaafajiyaan | Wararka IPhone
Eder Esteban | | Qalabka IPhone
Koogeek waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan duurka guriga smart. Shirkaddu waxay leedahay badeecooyin kala duwan oo loogu talagalay inay gurigeenna ka dhigto mid caqli badan, iyadoo ay u sii dheer tahay inay nolosheenna waxoogaa ka fududeyd. Tayo, alaab si fudud loo isticmaalo oo ku habboon malaayiin guri, laakiin marwalba qiimahoodu sax yahay.
Sidoo kale, waqti ka waqti ayaan la kulannaa dallacaadaha ku saabsan alaabtaada, sida hadda dhacday. Tan iyo markii aan helno qiimo dhimis ku saabsan xulashada alaabada Koogeek ee guriga ku yaal Amazon. Fursad wanaagsan oo lagu helo alaabooyinkan qiimaha ugu fiican qaab xaddidan.
1 Koogeek albaabka iyo dareemaha daaqada
3 Koogeek smart fiilada leh WiFi
4 Iftiinka iftiinka LED
Koogeek albaabka iyo dareemaha daaqada
Dareemahan aan ku isticmaali karno albaabbada iyo daaqadaha waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan shirkadda. Waxay u taagan tahay inay tahay ikhtiyaar aad u fara badan, maadaama loo isticmaali karo xaalado badan. Waxaan ku dhejin karnaa albaabada ama daaqadaha sidii wax soo saar amni, si aan u ogaanno haddii qof isku dayo inuu guriga soo galo. Sidoo kale si marka albaab loo furo nalka loo shido qol ama xitaa qolladaha.
Sidaa darteed wax soo saar aad u badan taas oo waliba taagan maxaa yeelay waxay la shaqaysaa Apple HomeKit, wax shaki la'aan ogolaanaya in si aad u raaxo badan loo isticmaalo marwalba. Tan iyo markii ay awood u yeelan doonto in lagu dhex daro nidaamka guryaha ee caqliga badan ee adeegsadayaasha. Intaa waxaa dheer in laguu oggolaado inaad wax walba ka xakameyso barnaamijka taleefanka oo aad aragto mar walba haddii qof isku dayay inuu soo galo.
Xayeysiintan Koogeek ee Amazon waan awoodnaa ku iibso kaliya 20,09 euro halkii aad ka iibsan lahayd 29,99 €. Si aan ugu helno qiimahan waa inaan isticmaalnaa lambarkan qiimo dhimista: 3LFDZEPD kaas oo la heli doono ilaa 30-ka Ogosto. Ha u ogolaan inay baxsato!
Waxyaabaha kale ee ugu caansan Koogeek waa xariggan korantada casriga ah oo wadarta saddex xarumood leh. Waad ku mahadsan tahay waan awoodi doonnaa xakameyno aaladaha aan ku xirno mar walba si isku mid ah. Tani waxay noo oggolaanaysaa inaan awoodno inaan shidno, damino ama barnaamij ka dhigno hawlgallada qalabkan qaab fudud, iyadoo la adeegsanayo barnaamijka shirkadda. Xitaa iyada oo aan loo baahnayn inaad joogto guriga ama qolkaas.
Intaa waxaa dheer, sidii caadiga ahayd alaabooyinka sumadda, waxay la shaqeysaa Apple HomeKit. Waxay sidoo kale ku habboon tahay Kaaliyaha Google, taas oo markaa noo oggolaan doonta inaan ku xakameyno xariggan xakamaynta codka qaab fudud iyadoo la adeegsanayo kaaliyeyaasha. Isticmaal runti raaxo leh, oo noo ogolaanaya inaan ogaano haddii qalab shaqeynayo iyo in kale. Qaabeynta sidoo kale waa mid aad u fudud.
Waxaan ku heli karnaa qiimo dhimis ku saabsan dhiirrigelintan ee alaabta Koogeek ee Amazon, adoo adeegsanaya lambarkan qiimo dhimista: SFFHRM95. Suurtagal ayey noqon doontaa illaa 30-ka Ogosto markay tahay 20:00 kiiskan. Qaabkan, waxaan ku iibin karnaa qiimo dhan 41,99 euro halkii aan ka iibsan lahayn 55,99 yuuro oo inta badan ku kacaysa.
Koogeek smart fiilada leh WiFi
Shay kale oo aad waxtar ugu leh gurigeenna waa furahan smart ka Koogeek. Waad ku mahadsan tahay, waxaan awood u yeelan doonnaa xakameynta aalad kasta oo aan ku xirnay. Markaa, way suurto gal noqon doontaa in la shido, la damiyo ama barnaamij laga dhigo hawlgalkeeda. Waxaan sameyn karnaa meel fog, annaga oo aan qolkaas joogin ama xitaa annaga oo aan guriga joogin. Intaa waxaa dheer, qaabeyntiisa waa mid aad u fudud.
Faa'iidooyinka ay ina siiso waxaa ka mid ah inay leedahay WiFi iyo wuxuu yahay la jaan qaadi kara Alexa ama Kaaliyaha Google. Sidaa darteed, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku xakameyno iyadoo la adeegsanayo mid ka mid ah kaaliyeyaashan guriga jooga, iyadoo la adeegsanayo codsiyadooda. Waxaan sidoo kale haynaa codsiga Koogeek oo la heli karo, kaas oo noo ogolaanaya inaan si fudud u isticmaalno marwalba, taas oo noo ogolaaneysa inaan xakameyno inay daaran tahay iyo in kale.
Waxaan ku heli karnaa qiimo dhimis ku saabsan dhiirrigelinta Amazon, adoo adeegsanaya nambarkan sicir-dhimista: 2RZJKXKK oo la heli karo illaa 30-ka Ogosto markay tahay 20:00 Marka waxaad haysataa waqti aad ku isticmaasho. Intaas waxaa sii dheer, waxaan heli karnaa qiimo dhimis iyadoo kuxiran qaybaha aan iibsanno:
Haddii aan iibsanno cutub, qiimahiisu waa 10,49 euro halkii laga heli lahaa 13,99 €
Haddii aan iibsanno laba qaybood oo xarig ah, qiimaheedu wuxuu ka bilaabmayaa 23,99 ilaa 17,99 euro
Markaad iibsaneyso seddex cutub, qiimaheedu wuxuu ka bilaabmayaa 43,99 euro oo kaliya 32,99 euro
Ugu dambeyntiina, waxaan kaheleynaa xarigga Iftiinka nalka ee Koogeek. Waa wax soo saar aad u badan, oo naga caawin kara U beddelo qolka guriga qaab fudud dhammaan noocyada xaaladaha. Maaddaama aan u adeegsan karno markaan daawaneyno filim, la ciyaarno qunsulka ama haddii aan casheynno. Iftiinka LED-ka ee xariiqdan wuxuu leeyahay in ka badan 1.600 midab, taas oo noo oggolaaneysa inaan la qabsanno dhammaan noocyada xaaladaha.
Intaa waxaa dheer, waan awoodnaa xakamee markasta adoo adeegsanaya barnaamijka Koogeek taleefanka, si aad u awoodo inaad maamusho xoojinta ama midabada. Faahfaahin muhiim ah ayaa ah isagoo LED ah, isticmaalkeeda tamarta ayaa yaraaday, taas oo noo oggolaaneysa inaan u adeegsanno muddo dheer annaga oo aan ka walwalin biilka kiiskan. Waxay sidoo kale la jaan qaadi kartaa Apple HomeKit, Alexa iyo Kaaliyaha Google, si aad ugu raaxeysato mar walba.
Waan awoodnaa ku iibso xariggan qiimaha kaliya 28,07 euro (laga dhimay 35,99 euro) ee dhiirrigelinta ku saabsan Amazon. Si aan ugu helno sicirkan waa inaan isticmaalnaa lambarkan qiimo dhimista: 8859HYDA in aan awood u yeelan doonno inaan adeegsanno illaa 30-ka Ogosto saacaddu markay tahay 20:00 fiidnimo. Ha seegin dhiirrigelintan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Ka faa'iideyso qiimo dhimista alaabta guriga laga helo ee Koogeek